Sheekada filimka Luka Chuppi: Kartik Aaryan iyo Kriti Sanon filim fariintiisa soo jiidasho leh ayay la imaadeen – Filimside.net
Sheekada filimka Luka Chuppi: Kartik Aaryan iyo Kriti Sanon filim fariintiisa soo jiidasho leh ayay la imaadeen
March 2, 2019 Zakarie Abdi
Taariikhda: March 2, 2019
Sanadii 2005 Hindiya waxaa qabsaday filimka hirgalay SALAAM NAMASTE ee HIT-ka weyn noqday kaasi oo xambaarsanaa fariinta lamaane isla nool oo aan xiriir rasmi ah ka dhaxeynin ama is guursanin (Live-in relationship) waxaana wada jileen Saif Ali Khan iyo Preity Zinta. 14-sano kadib xiligii la bilaabay fariintan xasaasiga ah ka hadlideeda waxaa la sameeyay filimo kooban oo isla fariintan xambaarsan intooda badana waxaa loogu tala galay reer magaalka waxaana lagu duubay magaalooyin casri ah.
Laakiin filimka LUKA CHUPPI isla fariinta lamaanaha aan is guursanin xiriir nololeed ka dhaxeeyo ka hadlaayo ayaa ka duwan filimadii horey loo arkay madaama lagu jilay xaafad yar oo gobolka Uttar Pradesh ka tirsan oo aan hormar saneyn.
Sidaa darteed Director Laxman Utekar oo markii ugu horeesay filim sameenayo wuxuu doortay fariin reer magaalka loogu tala galay laakiin tuulo lagu jilay wuxuuna hogaamiye kaga dhigan Kartik Aaryan oo dhalinyarada aad u jecel yihiin sidoo kalena filimkiisa ugu dambeeyay SONU KE TITU KI SWEETY wuxuu noqday Big Hit.
Jilaayaasha Filimkan: Kartik Aaryan, Kriti Sanon, Pankaj Tripathi, Vinay Pathak, Aparshakti Khurana iyo kuwo kale.
Waqtiga Uu Soconaayo: 2-saac iyo 6-daqiiqo.
Fariinta Filimka Luka Chuppi Oo Kooban: Superstar Nazim Khan (Abhinav Shukla) muran ayuu dhexda ka galaa markii ay dadka deegaankiisa ogaadaan inay la nooshahay gabbar uusan guursanin balse waxaa gurmad bad baado u fidinaayo askariga lagu magacaabo Vishnu Trivedi (Vinay Pathak).
Taliyaha ciidaanka deegaanka Vishnu Trivedi (Vinay Pathak) wuxuu dhalay gabbar lagu magacaabo Rashmi (Kriti Sanon) oo ku biireyso TV wararka soo saaro kadib markii ay dhameesatay waxbarashadeeda Jaamacada ee magaalada Delhi kusoo qaadatay.
Rashmi (Kriti Sanon) waxay is fahmayaan wiilka lagu magacaabo Guddu (Kartik Aaryan) kadibna jaceyl ayay isku qaadayaan waxaana bilaabanayo arimo xiiso badan.
Guddu (Kartik Aaryan) waxay isku dhacayaan walaalkiis aan weli guursanin Vikas (Himanshu Kohli) iyo seedigiis Babulal (Pankaj Tripathi) wuxuuna go’aan ku gaaraa si dhaqsi ah inuu ku guursado.
Fadlan walaal xayeysiimaha web-ka Filimside Click kusii hal mar oo kaliya xayeysiinta ka muuqato qoraalka aad aqrisaneysid.
Kadib Guddu (Kartik Aaryan) wuxuu saaxiibtiis Rashmi (Kriti Sanon) u bandhigaa guur laakiin wey ka diideysaa ayadoo usoo jeedineyso inay isla nooladaan inta ay noloshooda hadafyada ay ka leeyihiin ka gaarayaan.
Guddu (Kartik Aaryan) marka wuu ka yara baqaa fikrada ay saaxiibtiis usoo jeedineyso laakiin marka uu la tashto saaxiibkiis Abbas (Aparshakti Khurana) wuxuu ku qal qaalinaa inuu qorshahan aqbalo.
Guddu (Kartik Aaryan) iyo Rashmi (Kriti Sanon) waxay go’aan ku gaarayaan inay isla noolaadaan ayagoo is guursanin kadibna shaqo 20-maalmood ah waxay u aadayaan tuulada Gwalior waana deegaan qofna uusan iyaga aqoon u laheyn ayagoo halkaas ugu noolayaan si aysan cabsi ku jirin. Laakiin si ay helaan meel ay degaan waxay ku qasban yihiin marka ay gur kireesanayaan inay been sheegaan oo ay dhahaan waxaan nahay lamaane is qabaan.
Wax walbo oo u hagaagsan labadan dhalinta yar waxaa dhibaato u horseedayo Babulal (Pankaj Tripathi) oo ah Gudddu (Kartik Aaryan) seedigiis oo dadka dhexdooda ku arkaayo ayagoo isku dhow wuxuuna u qaadanaa inay is qabaan kadibna labada qoys ayuu war galinaa arinkaan waxaana la isugu imaanaa deegaanka Gwalior!
Haddaba maxaa dhici doono ayadoo jah wareer iyo arimo badan oo aan la ogeyn daaha laga qaadi doono sidoo kalena labadii dhalinta yaraa qorshahoodii nolosha fashilka ku imaanayo sidee ku xalin doonaan?
Maxaa Laga Yiri Fariinka Filimka Luka Chuppi:
Rohan Shanka sheekadiisa qaabka uu u quray waa hab la fahmi karo oo shactiro ku dheehan weliba doorarka filimkan si heer sare ah ayaa loo diyaariyay waxaa intaas u dheer in fariintan arimaha bulshada taabaneyso iyo qaabka dhaqanka dhalinyarada Hindiya isku badalaayo.
Director Laxman Uteka uma eko qof markii ugu horeesay filim sameeyay waayo si wacan ayuu filimkan u agaasimay waxaa intaas u dheer jilaayaasha uu heestay inuu tayadooda si sax ah kaga faa’iideestay weliba fariin reer magaalka loogu tala galay oo shactiro badan reer miyigana soo jiidan karto ayuu sameeyay.
Bandhiga Jilaayaasha: Kartik Aaryan laguma faaro sameynta fariimaha reer magaalka iyo dhalinyarada loogu tagalay wuxuuna ka qaatay filimkan door heer sare ah waana hubaal in shacbiyad balaaran ku heli doono qaabka uu filimkan u matalay dhanka shactirada iyo haddalada saameynta leh.
Kriti Sanon wey soo laabatay qurux iyo qaab jiliin wacan ayay shaashada la timid weliba qaybaha murugada ee qiirada badan iyada ayaa qaadatay waxaana intaas u dheer inay isku soo baxayaan Kartik Aaryan bandhig ahaan.
Aparshakti Khurana waa wiil marwalbo filimada door wacan ka qaato balse Vinay Pathak door adag ayuu qaatay oo saameyntiisa leh inta badan filimada shactiro ayuu ku jili jiray balse markaan door askari ayuu qaatay oo saameyntiisa leh.
Pankaj Tripathi isagana doorkiisa waa mid xiiso badan sidoo kalena dhamaan jilaayaasha filimkan kasoo muuqdeen mid walbo micno ayuu shaashada usoo galayaa.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimkan:
Bandhiga jilaayaasha is fahanka Kartik iyo Kriti soo bandhigeen.
Fariintiisa oo waaqici iyo shactiro la isku daray dhalinyaradana ka heleen
Halka saac dambe oo xiiso badan leh jah wareer iyo dareen qiiro badan.
Muxuu Ku Liitaa Filimkan:
Halka saac hore xoogaa caajis ayaa ka muuqdo meelaha qaar
Heesaha hirgaleen qaar ka mid ah ee filimkan marka hore lagu suuq geeyay si niyad jab ah toos uguma jiraan daawashad mashruucaan ee marka uu dhamaanayo ayaa lasoo qaadanayaa waana arin kale oo dhalinyarada niyad jebineyso.
Fariimaha noocaan ah wax cusub ma ahan sidaa darteed dadka qaar masoo dhaweyn doonaan madaama aysan ahayn fariin furan oo qof walbo daawan karo.
Qiimeynta Sheekada Filimka: 3.5/5 (Sedex xidig iyo bar)
Gunaanad: Luka Chuppi waa filim mada daalo wacan leh jaceyl, arimaha nolosha dhalinyarada iyo shactiro kusoo jiidaneyso si gaar ah halka saac dambe siweyn ayuu daawadayaasha usoo jiidan doono waa hubaal in filimkan guuleesan doono madaama dhalinyarada iyo reer magaalka ka heli doonaan:
Waxaa Aqrisay 647